Izay tia mahafoy… Ny soa atao levenam-bola - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
ALAHDY TSOTRA 13 A
2 Mpanj. 4, 8-11.14-16a ; Rom. 6, 3-4. 8-11 ; Mt. 10, 37-42
« Izay tia mahafoy… Ny soa atao levenam-bola »
Tantarain’ny evanjely androany ny lahateny famaranana ny hafatrafatra nataon’i Jesoa tamin’ny mpianany, mialohan’ny handehanan’izy ireo hamita iraka hanambara ny Fanjakan’Andriamanitra. Raha tsiahivina ny fizotran’ny fitantaran’ny evanjely dia : Nifidy roa ambin’ny folo lahy tamin’ireo mpianany i Jesoa ; naniraka azy ireo hanambara fa efa tonga ny Fanjakan’Andriamanitra ; sitranina ny marary, velomina ny maty, diovina ny marary hoditra, roahina ny demony… Nohafatrafarana izy ireo mba tsy hatahotra manoloana ny fanoherana sy ny fanenjehana. Ary amin’izao famaranana ny teniny izao dia manamafy i Jesoa fa ny fahafoizana, fahafoizan-tena sy ny fahafoizana izay ananana sy izay tiana sy lalaina, no antoky ny fahombiazana amin’ny asa fitoriana.
« Izay tia ny rainy sy ny reniny…, izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho Izaho, dia tsy mendrika Ahy… ». Asa mafy sady sarotra ny fitoriana ny Fanjakan’Andriamanitra indrindra ao anatin’ny tontolon’ny fanoherana sy fanenjehana. Mitaky fahafoizan-tena izany ary mitaky ny fahafoizana izay ananana sy izay tiana – toy ny fianakaviana ama-na vady aman-janaka – araka ny ambaran’ny evanjely eto. Tsy maintsy misafidy : ny ray aman-dreny sy ny zanaka ve sa ny Fanjakan’Andriamanitra ? Safidy izany fa tsy an-tery. Tsy misakana velively ny fitiavan-kavana, ny fitiavana ny fianakaviana, ny ray aman-dreny sy ny vady aman-janaka i Jesoa fa mametraka kosa ny soatoavin’ny Fanjakan’Andriamanitra mitaky ny fahafoizana izany rehetra izany. Ambaran’i Jesoa àry fa tsy fahafoizana terena fotsiny izany fa fahafoizana noho ny Aminy. Izy no fototry ny fitiavana, Izy no fototry ny fahavelomana. Ny fitiavana Azy Jesoa no ahafoizana ny zavatra rehetra, eny hatramin’izay tiana indrindra aza…
« Izay tsy mitondra ny hazofijaliany ka tsy manaraka Ahy, dia tsy mendrika Ahy ». Asa mafy sady sarotra ny fitoriana. Hazofijaliana lanjaina ny fisarahana amin’ny olon-tiana noho ny Fanjakan’Andriamanitra. Hazofijaliana lanjaina miaraka amin’i Jesoa anefa izany, mova tsy toy ny miaraka Aminy mizotra ny làlan’ny hazofijaliany makany Kalvery sy ny fahafatesana kanefa miaraka Aminy ihany koa mankamin’ny fandreseny nitsangan-ko velona. Izy ilay nahafoy, eny fa na dia ny lanitra aza, ka nidina tety an-tany, ary miantso namana Izy mba hiaraka Aminy mitondra ny hazofijaliana. Izay mitondra ny hazofijalian’ny tenany miaraka amin’i Jesoa dia tsy maintsy ho mpandresy miaraka Aminy… Tsy hazofijaliana ho tadiavina anefa izany fa hazofijalian’ny fiainan’ny mpitory ny Fanjakan’Andriamanitra.
« Izay mamonjy ny ainy no hahavery azy, fa izay hahafoy ny ainy noho ny amiko kosa no hahavonjy azy ». Asa mafy sady sarotra ny fitoriana ny Fanjakan’Andriamanitra. Eny, mety ho vita ihany ny hahafoy izay ananana. Mety hisy ihany ny herim-po hahafoy ray aman-dreny ama-na vady aman-janaka. Mety hisy ihany ny sahy hiaritra fijaliana sy hilanja ny hazofijaliany. Saingy hita fa betsaka no hiala an-daharana raha hihatra aman’aina izany. « Raha ho faty aho matesa Rahavana fa raha maty Rahavana matesa ny omby… », hoy ny fitenin-drazana malagasy. Mamy ny miaina, mamy ny aina kanefa izany aina sarobidy sy mamy indrindra izany ihany koa no takîn’i Jesoa amin’ny fitoriana ny Fanjakan’Andriamanitra. Fanamby goavana sy lalan’ny martiry ny mahafoy ny aina noho ny Aminy. Izy Jesoa ihany anefa no nahafoy ny ainy voalohany noho ny amin’ny Fanjakan’Andriamanitra sy nanokatra ny lalan’ny martiry rehetra.
« Jesoa Tompo ô ! Ianao nampianatra anay hizotra amin’ny lalan’ny Hazofijaliana, koa tolory tana-mamonjy izahay eto am-pamakivakiana ny fiainana, fa osa sy malemy, ary ombao ny herinao sy ny fitiavanao hanarahanay Anao hatramin’ny farany ».